Ungazvidzivirira sei kubva pamusika kusagadzikana? | Ehupfumi Zvemari
Gore rino, uye nekupokana nezvose, zvakakonzera kusagadzikana kudzokera kumisika yemari mushure memakore anopfuura matatu asina kuvapo mumabasa. Icho, chokwadika, mamiriro ezvinhu matsva akamanikidza vashoma nevapakati varimari kusiyanisa dzimwe nzira mukufamba kwavo muzvikwereti. Kunyangwe kubva kune mamaneja pachawo ayo aifanirwa kushambadza zvigadzirwa zvitsva zvemari mune ino yakakosha ficha inofungidzirwa.
Zvisinei pane chinyorwa chakanaka kune izvi mamiriro mumisika dzakasiyana siyana dzemari. Icho hachisi chimwe kunze kwekuwedzera kwekushomeka kungave chiratidzo chekusarudza mikana mitsva yebhizimisi kubva zvino zvichienda mberi. Zvese zviri zviviri nekuda kwekushandurwa kwehurongwa hwekudyara uye idzo dzinoreva kushandiswa kwezvigadzirwa zvitsva zvemari. Nedonzvo rekuwedzera maranho emubhadharo mune yega yega mashandiro anoitwa nevashandisi pachavo.
Kubva pane akajairika mamiriro, iwe uchafanirwa kubvuma kubva ikozvino zvichienda kuti inogona kunge iri maitiro akanaka kwazvo kudzivirira zvaunofarira iwe mubato rekudyara. Iko chete chinhu chauchazofanira kuchinja isisitimu yekudyara iwe yanga uchishandisa kusvika zvino. Hazvishamise kuti iri rakasiyana manejimendi modhi. Haisi nani kana yakaipa kupfuura vamwe, asi inoenderana nemamiriro matsva emari yemari. Chero zvazvingaitika, iwe uchazoda yakakura shanduko kukudziridza aya mashandiro sezvo unenge uri mumusika nharaunda isina kufanana sepakutanga.
1 Zviridzwa zvinopesana nekusagadzikana
2 Iko kushandiswa kweimwe nzira dzekudyara
3 Zvigadzirwa zvakagadzirirwa kusagadzikana
5 Tarisa kutsvaga kwakamisikidzwa uye nenguva
Zviridzwa zvinopesana nekusagadzikana
Pasina mubvunzo imwe yedzakakurumbira nzira dzekugadzirisa njodzi inosanganisira chokwadi cheicho chinonzi se kusiyaniswa nemapoka. Ndiyo sarudzo inoshandiswa nechikamu chakakura chevashambadziri uye kunyanya avo vane ruzivo rwakanyanya mukuita kunoitwa mumisika yemari yemari. Kuparadzaniswa nemapoka hakusi kungokurumidza chete. Asi inoshandawo nehupfumi kana nzvimbo dzenzvimbo. Izvi, mukuita, zvinoreva kuti haufanire kungogumira kune chero nzvimbo inonyorwa. Asi pane izvo zvinopesana.
Mupfungwa iyi, imwe ye zvirongwa zvinobudirira iyo yauinayo inosanganisira kuunza kunze kuenzana kugovera kunopindura kunzvimbo dzakakodzerana muzvikwereti. Uye izvo zvinoenderana neprofile iwe yaunounza semudiki kana wepakati investor nguva dzese. Ndokunge, vane hasha, vanofungidzira, vepakati kana vanozvidzivirira. Kusvika pachinzvimbo icho icho chinopa iwo anodikanwa madhairekitori ekuumba yakakwana yakaenzana mari yekudyara uye mauri iwe unogona kutora kusagadzikana sechinhu chakanyorwa pamisika yemari.
Iko kushandiswa kweimwe nzira dzekudyara
Hapana mubvunzo kuti zano iri rinogona zvakare kubatsira zvakanyanya kune zvaunofarira. Nekuti iwe unogona kusarudza ekudyara mamodheru ayo kusvika parizvino wanga usati wafunga kuvapo kwavo. Vanogona kubva kumisika ye zvipuka, chaiyo simbi kana zvimwe zvinogadzira zviyero. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti vanogona kuita zvirinani kuita pane izvo zvinonzi zvakajairwa mari zviwanikwa. Uye zvakare, chikamu chakanaka cheaya mamwe mabhajimendi akaumbwa senzvimbo yekuchengetedza nzvimbo kwavanokwezva mari kubva kune vanoita mari.
Kune rimwe divi, dzimwe dzesarudzo idzi dzakaratidza kuongororwa kunonakidza kwazvo mumakore achangopfuura. Mune zvimwe zviitiko zvakaderera mazinga ari pamusoro pe20% uye kuti chero zvodii ari margins ayo misika yemasheya isingakwanise kupa panguva ino. Kana zvedi izvo zvigadzirwa zvinobva pamari yakatarwa iyo inomira nekuda kwemutengo wakaderera mumutengo wemari semhedzisiro yemitemo yemari inogadzirwa nemabhangi epakati enzvimbo huru dzehupfumi. Mupfungwa iyi, sarudzo iyi inogona kuve mukana wakanakisa wekuita mari inobatsira muhafu yekupedzisira yegore. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Zvigadzirwa zvakagadzirirwa kusagadzikana
Ehe, panogara paine kushandiswa kweizvi zvigadzirwa zvemari senzira yekubuda mune mashoma ekukurudzira emamwe emari echinyakare misika yemari. Iko kukanganisa kukuru kweiyi bheji yekudyara kunogara mukuti iwe uchafanirwa kuenda kumari yekudyara kuti ugutse ichi chakakosha kudiwa chauinacho. Nekuti zviripo, ndipo panobatanidzwa hunhu uhwu, uhwo hwakabatana zvakanyanya nezvatinonzwisisa tese sekusagadzikana. Kunyangwe zviine nzira dzakasiyana maringe nemaitiro ekudyara mari. Chero zvazvingaitika, iri sarudzo chaiyo uye ndeye chete inoshanda kwenguva pfupi kwazvo.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti hwaro hweaya mamodheru ekuchengetedza hwakasimbiswa pahwaro hwekuita kwavo kwakanyanya mu zviitiko zvisingafadzi yezvikwereti. Zviri pano chaipo panonyanya kusangana netariro yekutenda. Kusvika padanho rekuyerera kwakakosha kwemari kunogadzirwa kunoenda kubva kune zvakajairika zvigadzirwa kune aya mamwe mamodheru ekudyara. Kunyangwe zvakakosha kuti uzive nguva yaunofanirwa kupinda mazviri nekuti ndiyo imwe yekiyi yekuvandudza yako wega kana yemhuri nhumbi.
Iwe zvakare unayo imwe sosi yekugadzira hombe capital capital mune yako statement statement, kunyangwe kubva pane imwe nzira ine hukasha. Kusvika padanho rekumhanyisa njodzi dzakawanda kupfuura idzo dzakagadzirwa kubudikidza nezvataurwa zvakapfuura. Izvo zvakaringana kuti iwe uzive kuti iwe unogona kurasikirwa nemari yakawanda mukuita uyezve kupfuura izvo zvakatotanga kuverengwa. Izvo ndezve kukuendesa iwe kune mashandiro akaitwa mune imwechete yekutengesa chikamu kana intraday sezvavanozivikanwa nevashambadzi vane ruzivo rwakawanda mukirasi ino yekufamba zvakanyanya.
Zvakanaka, zano iri rinogona kubatsirwa kuburikidza nekuonekwa kwekusagadzikana mumisika yemari. Nekuti kufamba uku kunogadzira kuchinja kunoonekwa pamitengo yavo. Nesimba rinoshamisa kwazvo pakati pemitengo yepamusoro uye yepasi. Asi iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuziva maitiro ekushanda mune aya mamiriro anodenha. Hazvishamise kuti vashandisi vese vanokwanisa kuita mashandiro aya anoda chirango chakakosha kwazvo kuti vazive kuremekedza kupinda uye kubuda kwematanho epfuma yemari. Sezvo mune mashoma masimendi idzi dzimba dzakapihwa.
Tarisa kutsvaga kwakamisikidzwa uye nenguva
Pane zvinopesana, vatengesi vanonyanya kuzvidzivirira vane zano iri imwe yeshongwe dzavo kuti varambe vachiita kuchengetedza kwavo kunobatsira. Unogona kuvawana kubva kumari yekudyara ivo pachavo sezvo paine mamwe mamodheru anopa ino yakakosha ficha. Nekudaro, chiyero chemubereko chinopihwa nezvigadzirwa izvi hachisi chakanyanya kukwirira. Kana zvisiri, pane kudaro, vanofamba neforogo izvo inotangira pa3% kusvika pa5%. Nechivimbiso chekuti iwe uchadzoresa mari dzekuchengetedza pamwe neicho chinoenderana nemhindu. Asi pasina iwe kukwanisa kuwana zvinoshamisira kudzoka, sezvazviri kune yakajairwa tsika mari yekudyara inopihwa nemaneja kana vezvemari vapindiri.
Chero zvazvingaitika, iri imwe nzira yekubuda panguva dzakaomesesa mumisika yemasheya. Nekuti pakupera kwezuva iwe ucharamba uchiwana mubairo wekuchengetedza nguva yako yawakachengeta kubva nzira dziri nyore kwazvo kupedzisa. Iyi kirasi yemari haina chinhu chakasimba kwazvo, asi mukutsinhana vanopa chengetedzo kune yako mari chirevo. Kunyanya kune mari dzinoitirwa nguva yepakati uye yakareba. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune yakanakisa mamiriro kuti ugadzire yakagadzika yekuchengetedza bhegi iyo inofanirwa kusimbisa.
Iyi ndiyo yekupedzisira sarudzo yemamiriro ekunze akanyanya kusagadzikana mumusika wemasheya. Nekuti iwe uchagara uchiwana kufarira, kunyange chiri chokwadi kuti ndechimwe chezvidiki pane zvaunogona kuisa pfungwa kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamise kuti zano rako rekudyara rakavakirwa pachokwadi chekuti kuchengetedzeka kunokunda njodzi. Chekutanga pane zvese, zvinovimbisa kuti iwe unogona kuve nemari yakatarwa gore rega rega, kutenderedza kushoma kwekudzoka kwakatenderedza 1,50%. Vanogona kusakupa zvakawanda kubva pakutanga, asi kana iwe ukaona maricho emari yemari misika iri kudonha zvishoma nezvishoma, unogona kushandura pfungwa dzako. Nekuti pane chinhu chimwe chete chechokwadi uye ichocho ndechekuti kubva kune izvi zvigadzirwa zvebhangi haungarasikirwe neyuro euro.
Iyo kirasi yemadhipatimendi ayo ari kuitwa musimba nesimba mune kupihwa iyo mabhanga anga achivandudza. Iwe hausisina mhando dzakawanda sezvawaingova uine mashoma mashoma apfuura. Asi kana zvakaringana kugutsa ichi chikumbiro chauinacho mune yakakosha nguva yehupenyu hwako. Nenguva yekukura inoitika pakati pemwedzi gumi nemaviri nemakumi matatu nematanhatu kuitira kuti vagone kuchinjika kune rako pachako semudyari mudiki nepakati. Kunyangwe nekusagadzikana kukuru kwekuti iwe haugone kuadzima pamberi nekuti mapena avo akanyanya. Nemitengo inosvika 12% pamari yakadyarwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ungazvidzivirira sei kubva pamusika kusagadzikana?
Nguva yenyasha Ndezvipi izvi?